Matipi ekugona kunakidzwa nezororo rakanaka sevanhu vaviri | Bezzia
Susana Garcia | | Psychology uye vaviri, Hukama
Zhizha riri kuuya uye naro nguva iyo patinowanzo kuenda kuzororo. Kune vanhu vazhinji vanoedza kuita zororo ravo fananidza iwo emumwe wako kuti mugovafadza pamwe chete. Nekudaro, pamazororo aya zvinokwanisika kuti matambudziko matsva aoneke pavanoshandisa nguva yakawanda pamwe chete, chimwe chinhu chatinofanira kudzivisa.
Tinoziva kuti iyo nguva yezororo ndipo panowanda vanyowani nezvikonzero zvinoverengeka. Zvakananga ndezvekuti vakaroorana vanopedza nguva yakawanda vari pamwe chete uye izvi zvinoita kuti hukama hutarise kubva kune imwe nzira. Ndosaka tichifanira kufunga nezvenzira yekunakidzwa nayo nemazororo semurume nemukadzi kuti tidzivise kubva pakuva tsaona.
1 Sarudzai kuenda pamwe chete
2 Imi vaviri munofanira kuronga
3 Ronga chimwe chinhu chinonakidza
4 Siya nzvimbo yekusurukirwa
5 Dzivisa kuzvidzwa
Sarudzai kuenda pamwe chete
Kana tichizoenda kuzororo tiri vaviri tinofanira kuita chimwe chinhu chatinoda isu tese. Dzimwe nguva hazvisi nyore nekuti tinogona kunge tiine mazano akasiyana, nzvimbo dzatinoda uye nedzimwe dzatisingaite, kana nzira dzakasiyana dzekufamba. Asi kutaura, iwe unogona kuuya nesarudzo yakanaka kune mose, mauri kunakidzwa mese. Kana iri refu zororo unogona kunyange kutsvaga akati wandei masaiti. Ndokusaka chinhu chekutanga kuita kutaura pakati penyu vaviri nezvezvinogona kuenda kwaungade kuenda uye nei uye nezvaungade kuita mazviri. Saka iwe unogona kuwana zano rekuti iwe unoda kuenda kupi pazororo.
Imi vaviri munofanira kuronga
Izvo zvakakosha kuti mese muratidze kufarira kana muchironga zororo renyu. Zvinogona kunge kuti mumwe ari nani pane mumwe asi zviri kukodzera taura pakati pevaviri uye tsvaga marudzi ese eruzivo. Izvo zvinodiwa kuti ubatanidzwe nekuti kana chete mumwe chete achiita basa rese rinozopedzisira rave kunetesa. Zvinotora basa rakawanda kuronga zvese kuitira kuti iwe ugone kupatsanura mabasa kuitira kuti mumwe nemumwe aite chimwe chinhu uye nekudaro azadzikise zvakafanana nekushanda semurume nemukadzi.
Ronga chimwe chinhu chinonakidza
Munguva yerwendo unofanirwa kuedza zvinhu zvitsva, chimwe chinhu chinokufadza uye iwe unogona kuita pamwe chete. Zvakanaka kuzorora asi newewo unofanirwa gadzira zvinonakidza zvekufamba kwendangariro uye kuita chimwe chinonakidza kana chinonakidza chiitiko chingave chakakwana. Zvinoitika izvo zvine hukama nenguva dzekukwirisa kwepamoyo ndidzo dzinoyeukwa zvakanyanya, saka izano rakanaka kuita chimwe chinhu chatinogara tichirangarira sechinhu chakanaka. Aya marudzi ezvinhu anowedzera hukama uye anowedzera chinonakidza kubata, chimwe chinhu chakarasika nekufamba kwenguva.
Siya nzvimbo yekusurukirwa
Rimwe rematambudziko makuru anouya pazororo sevakaroora nderekuti munoshandisa nguva yenyu mese pamwe chete uye zvinogara zvakanaka kuve nenguva dzako wega. Kunyangwe patinenge tiri pazororo zvinokwanisika kuva nenguva mukusurukirwa. Semuenzaniso, kana munhu achida kuona miziyamu uye mumwe achida kufamba-famba neguta, zvinokwanisika kupatsanura uye izvo munhu wese anoita zvavanoda kwemaawa mashoma. Iko kunogara kuri chiitiko chikuru kunakidzwa nezvinhu uri wega.
Kana chimwe chinhu chikatadza kufamba parwendo, dzivisa chero rudzi rwekuzvidzwa kune iye akaronga izvozvo. Isu tese tinokanganisa uye zvakajairika, kubvira zvinhu hazviwanzo kuitika sezvatinoronga. Asi chakakosha pazviitiko izvi ndechekuti semurume nemukadzi tinoziva mabatsirana kuti tikunde dambudziko iro rinomuka. Neiyi nzira hatisi kungosimbisa vaviri chete, asi tiri kudzidza zvakare kushanda pamwe chete. Izvo zvinodikanwa kuti udzivise nhaurirano uye kutukwa uko kusina kwazvinosvika. Chero zvazvingaitika, iwe unofanirwa kuziva matauriro ezvinhu nekuremekedzana, kuyedza kunzwisisa imwe uye nekudaro kuwana kukurukurirana kwakanaka semurume nemukadzi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Psychology uye vaviri » Matipi ekunakirwa nemazororo sevanhu vaviri